Azetidines Apicmo mpamokatra biochemical cdmo
Azetidine dia fikambanan'ny heterocyclic heterocyclic satroka misy atôma 3 karbaona sy atômatika iray. Vita amin'ny hafanana amin'ny hafanana amin'ny am-bongo miaraka amin'ny amoniana fofona mahery izy io ary tena fototra izy io raha oharina amin'ny ankamaroan'ny amines.
Azetidine sy ny vokatr'izany dia singa fototra tsy dia fahita firy ao amin'ny vokatra voajanahary. Indraindray, izy ireo dia singa manan-danja amin'ny asidra mugineic sy penaresidins. Ny azetidine-2-carboxylic acid, izay tsy misy proteinogenic homolog amin'ny proline, angamba ny azetidine be mpampiasa indrindra misy ny vokatra voajanahary.
Ny asan'ny N-Boc-azetidine-3-carboxylic (142253-55-2)